Iprofayile yomboniso | Indawo ezimbini | Iphepha leendaba laBagcisa abaBonakalayo kwi-Intanethi
Iphepha leendaba labaGcisa abaBonwayo kwi-Intanethi
Shicilela uVimba kwi-Intanethi
Ikhaya » amanqaku » Iprofayile yomboniso | Iipropathi ezimbini
Iprofayile yomboniso | Iipropathi ezimbini
U-DAVEY MOOR UPHAWULEZA UKUQOKELELWA KWE-OPW'S IRISH STATE UBUGCISA KUNYE nomboniso we 'DOUBLE ESTATE'
Umbono wofakelo, 'i-Double Estate', iMyuziyam yasePearse, ngo-2021; umfanekiso ngoncedo lukaDavey Moor kunye neOfisi yeMisebenzi yoLuntu.
IOfisi ye Imisebenzi Yoluntu '(OPW) I-Irish State Art Collection (ISAC), apho ndisebenza njengeqela leerejistra, eliquka imisebenzi eli-14,000 kuyo yonke into epeyintiweyo, eprintwayo, yokufota, eqingqiwe, yeeseramiki, yeglasi, yofakelo, yevidiyo, yokuzoba neyamalaphu. I-ISAC ifana nengqokelela yequmrhu kuba uninzi lwemisebenzi yobugcisa (ejikeleze iipesenti ezingama-90) iyaboniswa endaweni yokugcina. Umsebenzi wobugcisa ubekwe kwii-ofisi zikarhulumente nakwezinye iipropati zikarhulumente kwilizwe liphela.
I-ISAC yinxalenye yeqela elikhulu le-OPW yengqokelela, uninzi lwazo luqulathe uninzi lweepropathi ezilawulwa yi-OPW kunye neendawo zesikhumbuzo kwilizwe liphela. I-OPW- okanye iBhodi yezeMisebenzi, njengoko isaziwa njalo- yasekwa ngo-1831 nguMthetho wePalamente: UMthetho woKwandiswa nokuKhuthazwa kweMisebenzi yoLuntu eIreland. Ukusukela ngelo xesha, abasebenzi bayo baba ngabagcini benani elikhulayo leeasethi zelifa lemveli, kubandakanya nemisebenzi yobugcisa emininzi. IOfisi yoLawulo lwezobuGcisa (i-AMO) kwi-OPW yamiselwa ngasekupheleni kweminyaka yoo-1990 ukulawula ikhathalogu yokuqokelela ubugcisa kunye nokuthatha uxanduva lokumiliselwa kweepesenti yepesenti yeeprojekthi zobugcisa ze-OPW. Oko yasekwa, i-AMO igxile ekuxhaseni amagcisa aseIreland nakwindawo yentengiso ababonisa kuyo. Oku kwenziwa ngokuthenga ubugcisa bemihla ngemihla kwimiboniso kunye nokugunyazisa ngokuthe ngqo iiprojekthi ezithile zesiza. I-AMO ikwabandakanyeka ekugunyaziseni imifanekiso (imizobo kunye nemifanekiso eqingqiweyo).
Ngo-1978, i-OPW yazisa imigaqo-nkqubo yeepesenti yobugcisa e-Ireland. Oku kuye kwaphuhliswa ukutyhubela amashumi eminyaka kumgaqo-nkqubo wesizwe onabela kuwo onke amasebe karhulumente kunye noogunyaziwe bengingqi kwaye uye wanda kububanzi. Phantsi kweepesenti yobugcisa, i-1% yenkcitho eyinkunzi kulwakhiwo, iziseko zophuhliso kunye nemisebenzi yokuhlaziya yabelwe iiprojekthi zobugcisa ngaphakathi kwemida ethile yohlahlo-lwabiwo mali.
Kule minyaka mibini idlulileyo, i-AMO isebenzise inkqubo entsha yolawulo lokuqokelela. Le nkqubo iya kuthi ekugqibeleni idibanise yonke ingqokelela ye-OPW, kubandakanya nezo zeZiza zeMbali zeSizwe kunye neendawo ezininzi zeSikhumbuzo seLizwe. Ngelixa zihlala zodwa, ukuzidibanisa phantsi kwesambrela esinye sedijithali kwenza ukuba kube nokusebenzisana okukhulu phakathi kwamaqela okuqokelela i-OPW. Njengengxenye yale nkqubo, i-portal online iyenziwa, apho uluntu lunokukhangela izinto. Kucetyelwe ukuba kubekhona isiqalo sokuqala seerekhodi zento kunyaka olandelayo.
Olunye uphawu kwimisebenzi ye-AMO yinkqubo yomboniso. Qho ngonyaka ukusukela ngo-1991, kuye kwaqhutywa uthotho lwemiboniso yokukhenketha ukubonisa ababukeli ngokubanzi (ikakhulu intsha) umsebenzi ovela kwingqokelela. Ukusukela ngo-1997, oku bekubanjiswene noogxa bethu eBelfast abalawula ingqokelela yobugcisa baseNyakatho yeIreland. I-AMO ikwaqhuba neminye imiboniso ngaphandle kwale nkqubo yokhenketho, enye endiye ndayikhathalela: 'Double Estate', eqhuba ngoku kwiPearse Museum, eSt Enda's Park, eRathfarnham kude kube sekupheleni konyaka.
UBrian Crowley, umgcini wemyuziyam, wayejonge umboniso owawuthetha ngembali yaseSt Endaweni, neyayiyikhaya likaPatrick Pearse's Scoil Éanna, iziko awayelilungiselela ukunika “imfundo ngokucacileyo ibala laseIreland”. Yayinobugcisa obomeleleyo kwisilabhasi yayo kunye nomntakwaboPatrick uWilliam, umkroli oqeqeshiweyo, wayengutitshala wobugcisa. 'I-Double Estate' ngumboniso weqela ojonga imo yomntu ngokukhetha ngaphezulu kwamashumi amahlanu emisebenzi evela kwi-ISAC kuyo yonke into eprintiweyo, yokupeyinta, yokufota neyomfanekiso oqingqiweyo. Ezi zinto zinikezelwa ngokuchasene nembali yomfanekiso oqingqiweyo kaWilliam Pearse ovela kwingqokelela yaseSt Endaweni nasekubhaleni kukaPatrick Pearse kwiiarchetypes zomzimba kunye nendlela awayeziva ngayo ukuba abafundi bakhe kufuneka babe ziimbono zobuqhawe bamaCelt. Oku kubonisiwe kwimidlalo yeGaelic kunye nomdlalo wembali, imisebenzi apho ubuzalwana babubaluleke khona.
Ngaphandle kwemizobo yabazalwana bakaPearse, 'i-Double Estate' ayingomboniso we-portraiture, nangona kunjalo ikhutshiwe. Abantu abahleli kwiindawo abahlala kuzo abachazwanga; imbali kunye nabantu bezenkolo bacinge; Umoya wokungaphatheki ugcwele kwaye umhlaba oqhelekileyo ubonakala ukude. Umzobo ujonge ngakumbi ngesihloko esinegama kunokubhalwa komzobi wayo: abahleli njengempendulo yokuba 'kutheni' kuyilo lobugcisa, endaweni yokuziyolisa komdali kwaye kukuzonwabisa okuhlala kulo mboniso. Amagcisa azityhila ngolwimi oluqokelelweyo lweziphumo zawo. Kwelinye icala leli nqanaba ngumbonisi, ujonge kwaye angene. Basabela, badibanise kwaye bahlale kwimifanekiso eveza utyekelo olufihlakeleyo olunokubothusa, umnini (be).
Ubugcisa, intelekelelo kunye namandla okwenza ifantasy zonke iindlela zobugqi. Bahamba ngaphaya kwemvelo kunye nengqiqo yokubeka abantu ekuphakameni kwaye akuyonto elula ukucinga ukuba ookhokho bethu bababamba bengcwele. Ubugcisa beRock phantse buhlala bujolise kwi-animate- kuloo nto ngomphefumlo- endaweni yokuma komhlaba okanye into. Lo mfanekiso ungcwele, wokomfuziselo wenza isithunzi eside; abazingeli bepeyinti yangaphambili yomqolomba ebonisa iiarchetypes ezingafakwanga ezikholelwa kubuchule babazobi. Obu bumbini buya kubuya buqine kwezobuchwephesha benkulungwane yamashumi amabini, xa amagcisa, kunye nokuhamba konke, kuthathelwa ingqalelo ubunyani bexabiso. Ubugcisa bezinto ezingcwele zemihla ngemihla bunyamezelekile, kwaye ekuhambeni kwexesha, amanani aye esonyuswa kwilizwe elibonakalayo. Nangona kunjalo, njengoko 'iTrans Estate' ibonisa, kuqhelekile ukuba imeko yobugcisa bokomfuziselo ingabikho ngaphezulu koncediso.
Ukuba ukwahlulwa kwento ekuthethwa ngayo kukumela umzimba kubugcisa beminyaka eli-100 eyadlulayo (engama-60 yayo egutyungelwe kulo mboniso) kwenzeke, kuzisa ukubonakaliswa kwayo ngakumbi kummandla wazo zonke izinto eziyinyani eziyinyani. Ukufana ayingombuzo wokuzixhalabisa ngale ndlela. Endaweni yoko, kufana nezimelabizo ezininzi. Singazibalisela le mifanekiso kulo mboniso kuthi, kwabo sibaziyo nakwabo sinokubacingela. Sinokupheliswa okanye sitsaleleke kwezi, kodwa amehlo ethu anokuhlala ixesha elide ngaphandle kwako.
UDavey Moor nguMbhalisi woQokelelo lobuGcisa baseIreland kwiOfisi yeMisebenzi yoLuntu.
'I-Double Estate' ivulwe kwiPearse Museum ngomhla wama-25 kuCanzibe kwaye iya kuqhuba kude kube sekupheleni konyaka. Ukubhukisha kuyacetyiswa, njengoko amanani avunyelweyo kwimyuziyam emancinci. Ikhathalogu enemibala egcweleyo enamaphepha angama-64, eyilwe ngu-Oonagh Young, ehamba nalo mboniso kwaye iyafumaneka simahla kumyuziyam.
Inqaku elilandelayo →
Yintoni eqhubekayo eIreland
Indlu yokujonga iintsimbi,
Isitalato iOliver Bond,
Inombolo: + 353 (0) 1 672 9488
Ifekisi: + 353 (0) 1 672 9482
Iiyure ze-Ofisi eDublin:
NgoMvulo-Lwesihlanu 9:30 am - 5:30 pm
IOfisi yoMntla Ireland
IBelfast, iBT1 1FF
Inombolo: + 44 (0) 28 9587 0361
Amagcisa aBonakalayo iIreland sisiseko esixhaswa ngemali ngu:
Iphepha leendaba labaGcisa abaBonwayo Ushicilelo lweeVenkile eziBonwayo zaseIreland oluprintwa kathathu ngonyaka. Iphepha leendaba laBagcisa abaBonakalayo kwi-Intanethi linika abafundi bethu iqonga lokuxoxa ngamanqaku kunye nezihloko eziqulethwe kupapasho olushicilelweyo.
Amalungu e-VAI afumana ikopi yohlelo lwethu oluprintiweyo ngqo eminyango yabo, kathathu ngonyaka.
Fumana okunye malunga nokujoyina i-VAI.
Amagcisa aBonakalayo eIreland
Amagcisa aBonakalayo eIreland yiprojekthi exhaswa ngemali yile:
IQumrhu eliMeleyo laseIreland laBagcisa abaBonakalayo kuzo zonke iiFomu zoBugcisa
Umbutho wabazobi baseIreland t / a Ababukeli baseIreland baxhaswa ngemali liBhunga lezoBugcisa / iChomhairle Ealaíon, iBhunga lobuGcisa laseNyakatho yeIreland, kunye neBhunga lesiXeko saseDublin.
Isibonelelo esibhalisiweyo esingu-CHY 9629
Umxhasi: UMichael D. Higgins, UMONGAMELI WASERELAND
Amagcisa aBonakalayo iIreland ixhaswe ngu:
Ilungelo lokushicilela © 2021 | MH Ucoceko lweWordPress Umxholo ngu MH Izihloko